Noelin’ny Ankizin’ny lalana ao amin’ny CHT | Grandir à Antsirabe
Noelin’ny Ankizin’ny lalana ao amin’ny CHT
→ Ny alarobia 20 desambre 2017
Ny fikambanana eto an-toerana dia nankalaza ny fetin’ny noely ny alarobia 20 desambra 2017. Nihazo ny lalana mankany Andraikiba, kilometatra vitsivitsy miala an’Antsirabe ; fotoana nahafahan’ny ankizin’ny trano fiampantranoana vonjimaika sy ny ekipa rehetra eto an-toerana nihaona.
Ny ekipa mpikambana ao amin’ny fikambanana dia samy nanomana lalao ara-pirahalahiana mifototra amin’ny fampivelarana ny firaisan-kina eo amin’ireo ankizy.
Miisa 8 ireo lalao izay notanterahina tamoron’ny reniranon’Antdraikiba, toerana maitso sy didinina ala. Ny tapakandro maraina dia nifaninana tamin’ny lalao ireo ankizy izay nahitana ekipa 4, navitrika tokoa izy ireo ary nafana ny lalao.
Ireo ekipa 2 voalohany nandresy kosa dia nahazo t-shirt sy satroka.
Taorian’iny hetsika nafana sy feno fihetsem-po iny dia niala voly kely ireo ankizy tamin’ny alalan’ny hira sy dihy ary lalao baolina kitra alohan’ny hisakafoanana. Namoaka ny traik’efany tamin’ny fandrahoana ireo mpahandro sakafo : vary miaraka amin’ny laoka hen’omby sy akoho saosy, lasary karoty, kokombra sy voatabia ary akondro sy mofo mamy. Tena natsiro!!
Rehefa voky tsara daholo ny rehetra dia indro tonga i Dadabe noely nitondra fanomezana efa nomaniny ho an’ny ankizy tsirairay : kapapneu ! kapa vita amin’ny kodiarana fiarakodia, tsy manimba tontolo iainana ary tena maharitra sy mafy. Samy nahazo kapa avokoa ny ankizy tsirairay, miampy kilalao kely sy vatomamy.
Ary farany, talohan’ny nanakatonana iny tontolo andro nahafinaritra iny dia niara-nilalao ireo ankizy sy ny ekipa, nentanin’ireo mpanabe.
Tonga ny ora nodiana ! ny hariva, na dia vizaka aza ny rehetra dia hita soritra teny amin’izy ireo ny hafaliana. Rehefa tonga tao amin’ny trano fandraisana vonjimaika izy ireo ny ampitso, dia iny fotoana niaraha-nifaly iny no votoaton-dresaka : lalao sy fotoana mamy niarahana tamin’ny ekipa rehetra
Tsindrin-daona ny rehetra miandry ny fivoahana manaraka !!